SARS-CoV-2 Yakasiyana Nucleic Acid Detection Kit I (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)
SARS-CoV-2 Yakasiyana Nucleic Acid Detection Kit II (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)
SARS-CoV-2 Yakasiyana Nucleic Acid Detection Kit III (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)
Direct PCR tekinoroji inoita kuti PCR ive nyore
ne admin pane 2021-06-28
Yakananga PCR maitiro anoshandisa zvakananga mhuka kana masisitimu emiti yekuwedzera pasina nucleic acid kuburitsa. Munzira dzakawanda, PCR yakananga inoshanda senge yakajairwa PCR Musiyano mukuru ndeyeye buffer yetsika inoshandiswa muPCR yakananga, muyenzaniso unogona kuiswa pasi pePCR reaction pasina nucl ...
Makore gumi ekurodza munondo | Sichuan University Rwiyo Xu timu yakawana kuti nemesis ye "super bacteria" iri mukati mako neni
Vatengi veChikoro cheLife Sayenzi, Sichuan University vakaburitsa mapepa akakwira zvibodzwa vachishandisa zvigadzirwa zveForegene, zvine simba rekuita 17.848 Nguva pfupi yadarika, Rwiyo Xu timu kubva kuChikoro cheHupenyu Sayenzi yeSichuan University yakaburitsa pepa rekuvhara rakanzi Coagulation zvinhu VII, IX uye ...
Ndinogona Kuedza iyo Coronavirus Pamba?
ne admin pane 2021-06-24
Vanhu vazhinji vanogona kuve nemubvunzo wakadai: Ndinogona here kuyedza Novel Coronavirus kumba? Mhinduro ndeyokuti hongu Unogona kusarudza SARS-CoV-2 antigen yekutsvaga kits kuyedza novel coronavirus kumba. Kukosha kweSARS-CoV-2 antigen kuonekwa Iyo SARS-CoV-2 antigen bvunzo inogona kuona zvakananga ...
Pakutarisa 丨 Iyo yakazara yakakwana pathogenic microorganism yekuona tekinoroji
ne admin pane 2021-06-20
Pathogenic tupukanana tusingaoneki tupukanana tupuka twunogona kupinda mumuviri wemunhu, twunokonzeresa utachiona uye kunyangwe zvirwere zvinotapukira, kana utachiona. Pakati pezvirwere, hutachiona uye hutachiona ndizvo zvinonyanya kukuvadza. Kutapukirwa ndechimwe chezvikonzero zvikuru zvehutano hwevanhu nekufa. Mukutanga kwezana ramakumi maviri, iyo ...
Nhanganyaya: RNA mamorekuru anogona kuwirirana zvakanyanya nemamwe mamorekuru ehupenyu, senge protein, DNA neRNA, uye nekudaro zviripo mumasero uye zvipenyu nenzira yemacomolecular complexes. Pakati pavo, RNA-protein complexes ndiko kuvapo uye basa reRNA Imwe yemhando dzakakosha dze ....
Kukurumidza kuzivikanwa kweiyo transgenic michero
ne admin pane 2021-06-09
Pfupiso Kurumidza kuzivikanwa kwemasisitimu echinyakare Chinyorwa / Tong Yucheng Ongororo yekushanda / Han Ying Edhita / Wen Youjun Mazwi / 1600 + Yakataridzirwa kuverenga nguva / maminetsi 8-10 maminitsi Anokurumidza kuzivikanwa kwezvirimwa zvemagetsi ...
Foregene SARS-CoV-2 Yakasiyana Nucleic Acid Detection Kit Yakawana CE
ne admin pane 2021-05-26
Foregene yakabudirira kuwana CE chitupa cheiyo nyowani simba chigadzirwa SARS-CoV-2 Variant Nucleic Acid Detection Kit Musi wa21 Chivabvu, zvinoreva kuti chimwe chigadzirwa chaForegene chichatumirwa kune vese pasirese! Foregene ine akateedzana Covid-19 bvunzo kits yakawana iyo CE, SARS-Co ...
Foregene inotangisa chigadzirwa chitsva chesimba - SARS-CoV-2 Variant Nucleic Acid Detection Kit
ne admin pane 2021-05-21
SARS-CoV-2, hutachiona hunokonzeresa COVID-19, hwakakanganisa zvikuru hutano hwevanhu pasi rose; kutapukira nhamba huru yevanhu; kukonzera chirwere chakakomba uye inosangana kwenguva refu yehutano sequelae; zvichikonzera kufa uye kufa kwakanyanya, kunyanya pakati pevakuru uye vanotambura ...
Kuongorora COVID-19 B.1.1.7 uye B.1.351 Mazera
ne admin pane 2021-03-26
Foregene yakagadzira iyo Covid-19 musiyano wenicic acid yekuona kit. Mukupindura SARS-CoV-2 musiyano (ichibuda kubva kuUK neSouth America), kambani yedu yakagadzira nucleic acid yekutsvaga kit yeiyo Covid-19 hutachiona hwakasiyana zvichienderana nemakore esimba rehunyanzvi. Iyo kit yakavakirwa pane th ...
Foregene yakabudirira kupedzisa Series A mari
ne admin pane 2021-01-28
Musi waNovember 20, 2020, Foregene Co, Ltd. uye Shenzhen Shangyang Asset Management Co, Ltd. (ino inonzi Shenzhen Shangyang) yakasaina chibvumirano chakakosha chekudyara. Shenzhen Shangyang akaita akateedzana A kudyara kwemamirioni akati wandei RMB muForegene, uye iyo ini ...
Foregene Covid-19 Nucleic Acid Detection Kit yakapasa EU CE uye Singapore HSA chitupa
ne admin pane 2020-03-18
Pakutanga kwehosha, Foregene akanyatsoteerera, uye akaronga tsvagiridzo yesainzi nekukurumidza kuti vape mari muR & D yemakona matsva ekuona coronavirus nucleic acid. Kubva pamakore eakaunganidzwa technical technical uye ruzivo, timu isu ...